घिउकुमारीका यी १५ फाइदाबारे थाहा छ ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/घिउकुमारीका यी १५ फाइदाबारे थाहा छ ?
घिउकुमारीका यी १५ फाइदाबारे थाहा छ ?
एलोभेरा अर्थात घिउकुमारी औषधीय गुणको वनस्पती हो, जो सहजै बगैंचा वा करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । यसलाई सानो गमलामा रोप्न सकिन्छ । हुर्काउन र स्यहार्नका लागि पनि खासै गाह्रो छैन । अर्थात हाम्रो निम्ति गुणकारी वनस्पती हो यो ।
२. हाम्रो शरीरको भित्री अंगहरु सफाइ गर्नमा पनि यो उपयोगी हुन्छ । यसले शरीरको नसा, नाडी आदि सफाइ गर्छ ।३. छाला र केसलाई बलियो, मुलायम बनाउनका लागि घिउकुमारीले प्रभावकारी काम गर्छ ।
४. घिउकुमारीको जुस सेवन गर्दा छाला रुखो हुँदैन । चम्किलो र नरम हुन्छ ।५. घिउकुमारीको जुस सेवन गर्दा अनुहारको खराबी, मूसा, रुखोपन, चाहुरी, दाग धब्बा हट्छ ।
७. तौल नियन्त्रण गर्नका लागि पनि घिउकुमारीको जुस उपयोगी हुन्छ ।८. घिउकुमारी जुसले दाँत सफा गर्ने र रोगमुक्त राख्छ । यसलाई माउथ प्रmेशनरको रुपमा काम गर्छ ।
९. यसले केस झर्ने समस्याबाट पनि मुक्ती दिन्छ ।१०. फेसवासको रुपमा समेत घिउकुमारी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
११. घिउकुमारीको जुस नियमित रुपले सेवन गर्दा कब्जियतबाट छुटकारा मिल्छ ।१२. घिउकुमारीको जुसले मधुमेहमा पनि राहात मिल्छ । साथै कोलोस्टोर नियन्त्रणमा पनि यो प्रभावकारी हुन्छ ।
काठमाडाैं दहचाेकमा छोराले गरे आमा-बाबुमाथि खु’कुरी प्र’हार, छोरा प’क्राउ